राजा सोलोमन भाग २२ को खानी - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-03 > खनालहरू राजा सुलेमानको भाग 22
"उनीहरूले मलाई आदेश दिएनन्, त्यसैले म चर्च छोड्दैछु" जेसनले उनको स्वरमा कटुताका साथ गुनासो गरे जुन मैले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। "मैले यस समुदायको लागि यति धेरै काम गरेको छु - मैले बाइबल अध्ययन गरेको छु, बिरामीहरूलाई भेटेको छु र पृथ्वीमा किन उनीहरूले हिसाब गरे ... व्यवस्थित? उनको उपदेश सुत्नुपर्दछ, उनको बाइबल ज्ञान कम छ र ऊ मित्रहीन छ! » जेसनको आक्रोशले मलाई चकित तुल्यायो, तर यसले सतहमा अझ गम्भीर कुरा देखायो - उसको गर्व।
बहु उद्यमी र लेखक स्टीभन के। स्कट हजारौं कर्मचारीहरु संग एक मिलियन मिलियन डलर उद्यमी को कथा बताउँछ। यद्यपि उनीसँग पैसा किन्न सक्ने सबै चीजहरू थिए तर उनी दुखी, तितो, र छिटो स्वभावका थिए। उनका कर्मचारीहरु, उनको परिवार समेत तिनीहरु लाई अपमानजनक लागे। उनकी पत्नीले अब उनको आक्रामक व्यवहार सहन सकेन र उनको पास्टरलाई उनीसँग कुरा गर्न आग्रह गरे। पादरीले उनको उपलब्धिहरु बारे मान्छेको भाषण सुने र तुरुन्तै यो महसुस गर्‍यो कि घमण्डले यस मानिसको हृदय र दिमागलाई चलाउँछ। उसले आफैंले केही पनि बाहिर आफ्नो कम्पनी निर्माण गरेको दाबी गर्‍यो। उनले आफ्नो विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त गर्न कडा परिश्रम गर्ने थिए। उसले घमण्ड गर्दै भन्यो कि उनले आफैं आफैंले गरेका थिए र कसैप्रति कुनै .णी छैन। पास्टरले त्यसपछि उहाँलाई सोध्यो: «कसले तपाईंको डायपर परिवर्तन गर्‍यो? कसले तिमीलाई बच्चाको रूपमा खुवायो? तिमीलाई कसले पढ्न र लेख्न सिकायो? कसले तपाईंलाई यस्तो रोजगारहरू दियो कि जसले तपाईलाई आफ्नो अध्ययन पुरा गर्न सक्षम बनायो? क्यान्टीनमा तपाईंलाई कसले खाना दिन्छ? तपाईंको कम्पनीमा शौचालयहरू कसले सफा गर्छ? » प्रवेश गरे, र आफ्नो टाउको झुकाए। केहि क्षण पछि उसले आँखामा आँसु लिएर स्वीकार्यो: «अब जब म यसको बारेमा सोच्दछु, मँ देख्छु कि म यी सबै आफ्नै लागि गर्न सक्षम भएको छैन। अरूको दया र समर्थन बिना, म शायद केहि हासिल गरेको छैन। पादरीले उहाँलाई सोधे: "के तपाईं थोरै कृतज्ञता पाउन योग्य हुनुहुन्छ भन्ने लाग्नुहुन्न?"
त्यस व्यक्तिको मुटु परिवर्तन भएको छ, एक दिनदेखि अर्को दिनसम्म। त्यसपछिका महिनाहरूमा उनले आफ्ना प्रत्येक कर्मचारी र सबैलाई धन्यवाद-पत्रहरू लेखे जसलाई उसले सोचेसम्म उनको जीवनमा योगदान पुर्‍याएको छ। उसले कृतज्ञताको गहिरो भावना मात्र महसुस गरेन, तर वरपरका सबैलाई आदर र मूल्यांकनका साथ व्यवहार गरे। एक वर्ष भित्र उनी अर्कै व्यक्तिमा परिवर्तन भए। आनन्द र शान्तिले उनको मुटुमा क्रोध र उथलपुथल हटाएको थियो। ऊ वर्षौं कान्छी देखिन्थ्यो। उनका कर्मचारीहरूले उनलाई मन पराए किनभने उनले उनीहरूलाई आदर र सम्मानका साथ व्यवहार गरे, जुन अब साँचो नम्रताको लागि ल्याइएको छ।
"मैले गरेजस्तै गर्नुहोस्" नम्र हुनुको मतलब यो होइन कि हामी आफैंलाई तुच्छ ठान्छौं वा हाम्रो प्रतिभा र चरित्रको बारेमा कम राय छ। यो निश्चित रूप मा आफूलाई केहि र कुनै को रूप मा प्रस्तुत को बारे मा छैन। किनभने त्यो एक घुमाइएको घमण्ड हुनेछ जसको लागि विनम्रताको लागि प्रशंसा गरिनु पर्छ! नम्रताको बचाव गर्न, अन्तिम शब्द प्राप्त गर्न चाहने, वा अरूलाई यसको श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न तल झार्न केही सरोकार छैन। हामी आफैंमा फुलेको गर्व गर्दछौं ताकि हामी परमेश्वरबाट स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्छौं, आफूलाई बढी महत्त्वपूर्ण ठान्छौं र उहाँबाट बिर्सन सक्छौं। नम्रताले हामीलाई परमेश्वरको अधीनमा पार्छ र हामी उहाँमा पूर्ण निर्भर छौं भनेर स्वीकार्छ। यसको मतलव हामी आफैंलाई हेरेनौं, तर पूर्ण रूपमा परमेश्वरतिर फर्क्यौं जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई भन्दा बढी राम्रो देख्नुहुन्छ।
आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धोइसक्नुभएपछि, येशूले भन्नुभयो, "मैले तिमीहरूका निम्ति जे गरें त्यो गर्नुहोस्।" अरूको खुट्टा धुनु भनेको एउटै मात्र तरिका अरूको खुट्टा धुनु हो भनेर उसले भनेन, तर कसरी बाँच्ने भनेर एउटा उदाहरण दियो। नम्रता निरन्तर र सचेतपूर्वक सेवा गर्ने तरिकाहरू खोज्दैछ। यसले हामीलाई वास्तविकतालाई स्वीकार्न मद्दत गर्दछ, जुन कि परमेश्वरको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, हामी उहाँका जहाजहरू, उहाँका बोक्नेहरू र संसारमा प्रतिनिधिहरू हौं। मदर टेरेसा "सक्रिय विनम्रता" को एक उदाहरण हुन्। उनले भनिन् कि उनले येशूको अनुहार हेरिन् जो सबैले उनको अनुहारमा देखी। हामीलाई अर्को मदर टेरेसा हुन नहुन सक्छ, तर हामी हाम्रो सँगी मानवको आवश्यकताको बारेमा बढी चिन्तित हुनुपर्दछ। जब हामी आफैंलाई धेरै गम्भीरतासाथ लिन प्रलोभित हुन्छौं, आर्चबिशप हेलेडर क्यामाराका शब्दहरू सम्झन सल्लाह दिइन्छ: I जब म सार्वजनिक रूपमा र ठूलो श्रोताहरूले ताली बजाउँछु र उत्साहित हुन्छु, म ख्रीष्टतिर फर्कन्छु र उसलाई भन, प्रभु, यो यरूशलेममा तपाईको विजयी प्रवेश हो! तपाईं सवारी भएको सानो गधा हुँ।